I-1800 yamadoda Yambatha - Mens Historical Clothing
Kwiminyaka elishumi yokuqala ye-1800, amadoda aphumelele wamkela iifashoni ezazifanele amaxesha asesikweni, omsebenzi kunye namaxesha athile. Inkqubo ye- Ngeminyaka yoo-1800 zonke bezipolish kunye nobunkunkqele (ngakumbi ishumi leminyaka lokuqala), elibonakalayo kwimpahla eyayinxityiwe- ngakumbi ngamadoda.
Oko Abantu Babenxiba Ngeminyaka Yee-1800
Ekuqaleni kwenkulungwane, umgangatho wokunxiba kwamadoda wawusanamathele kwizitayile zenkulungwane ye-18, kunye neebhulukhwe ezifika emadolweni ezinxitywe esitokisini, ibhatyi yomsila isikwe phezulu ngaphezulu kweebhulukhwe, iikhola zajika zarhwebeshela iicravats intamo. Umnqwazi wokuzikhethela wawudla ngokuba ngumnqwazi ophezulu kwaye uninzi lwamadoda lwaluphatha iintonga zokuhamba. Izambatho zazisanxitywa ngeli xesha; kodwa ngo-1820 oku kuye kwathathelwa indawo idyasi esebenzayo.
Izitayile zokunxiba ezingama-80s ezinemifanekiso yamadoda
Ifashoni yamadoda ehlotyeni
Jonga ezinye zeefashoni ezinqwenelekayo nezibonisiweyo ukusuka kwiminyaka ye-1800:
IiBreeches - Uhlobo lwendoda yamadoda ayenxiba rhoqo, emisa okanye ezantsi kwedolo kwaye kwezinye iimeko ifike eqatheni. Ziye ziqine zijikeleze umlenze ngentambo, i-buckles okanye imitya. Xa benxibe iibhulukhwe emadolweni, iikawusi zamadoda zatsalwa kwaye zatyhilwa ngokupheleleyo.
Iipaneli - Ifom yokuqala yebhulukhwe ekhululekile. Olu hlobo lweebhulukhwe lwalunxitywa ngamadoda njengengubo yesitalato kuba iibhulukhwe zazithathwa njengezisesikweni.
Iidyasi ezinemisila - Ngeli xesha, iidyasi zamadoda zazinemisila emide ngasemva ngephambili elifutshane. Uyilo ngeli xesha lukwanazo neekhola ezimileyo kunye nee-lapel ezimile njengo-M.
Iihempe -Ihempe zamadoda zibonakalise kakhulu ii-cuffs ezincitshisiweyo, iikhola eziphezulu kwaye ngamanye amaxesha ziba ruffles ezantsi ngaphambili.
Iidyasi - Le ndlela yengubo yayiqulathe ezantsi ezikwere kunye nesinqe esiphakamileyo. Babenamabele aphindwe kabini ngokubanzi.
Iingubo ezinkulu -Isitayile sedressier yengubo enxitywa ngamadoda edla ngokubonisa uboya okanye velvet. Ukuyinika ukujonga okuhle ngokwenene, ii-caplet ezimfutshane eziqhotyoshelwe kwikhola.
Iibhothi zeHessian -Isitayile sebhutsi esasineenwele kunye noyilo olumilise intliziyo ngaphezulu.
Iibhotshi zaseWellington -Ebizwa ngegama likaDuke waseWellington, ezi bhutsi zazinqunyulwe kakhulu ngasemva, ngelixa umphambili wawusikwe waguqa ngamadolo.
Cravat - Amadoda abophe intamo okanye amarhonya ayenxibe ii-1800's ezazingumanduleli womhla wanamhlanje weentsimbi okanye iqhina.
Umnwazi ongaphezulu - Esona sitayile sithandwayo sasenziwe ngohlobo lwekhowuni kunye nokuphakama ubude.
IiWigs - iiwigi ezenziwe ngumgubo yayiyindlela yokuqinisekisa amandla akho kwaye umhlaba uwazi umsebenzi wakho. Imisebenzi ehlonitshwa kakhulu njengoogqirha, amagqwetha kunye namalungu omkhosi babenxiba iiwigi ezinamandla rhoqo.
Amalaphu endawo athandwayo
Amalaphu asetyenziselwa iimpahla zamadoda ze-1800 zazibaluleke kakhulu kuba yayidlala indima enkulu kwiifashoni ezinombonakalo ococekileyo. Ezinye zazisetyenziswa ngaphezu kwezinye, kodwa zonke zazinobunewunewu.
Uboya - Isetyenziselwa iibhatyi kunye neebhatyi.
IVelvet - Ilaphu elidumileyo elisetyenziselwa ukwenza iidyasi, iibhatyi kunye neminqwazi.
Ilinen -Eli lelona laphu lisetyenzisiweyo kwiihempe zamadoda, nangona kunjalo izitayile ezithile zebhulukhwe zisebenzise ilinen ngokunjalo.
Isikhumba - Zonke izihlangu zamadoda zenziwe ngofele. Izixhobo ezinje ngeiglavu zazizezofele.
Umtya wentambo - Isinxibo kwizitayile ezininzi zehempe nakwezinye iibhatyi.
Isilika - Ezinye zeebhatyi ezintsonkothileyo kwaye zibiza kakhulu zenziwe ngesilika.
Xa ujonga emva kwiminyaka elishumi yokuqala ye-1800 yeendlela zefashoni, ayothusi into yokuba ezinye zezinto abazinxibileyo zisabonakala nakwimfashini namhlanje. Umahluko omkhulu kukuba imfashini ngoku ixhaphake kakhulu kunangaphambili. Inkangeleko ephucukileyo nepolishiweyo ebonakala ebutsheni beminyaka yoo-1800 yaya isiya izitayile ezingekho sesikweni.
Ngokukhula kobukhosi bukaNapoleon, ibhlukhwe zaba nde ixesha lokuqala ezimbalini kwaye zaziza kuhlala kunjalo. I-Slimmer, iingubo ezimfutshane zokunxiba ishishini zaye zaduma ngakumbi; I-cravats ngokuthe ngcembe ziye zangqungqa kancinci, zanika indlela yokunyuka, ukubopha iqhina kwaye ekugqibeleni zinezandla ezine. Ukuphela kwenkulungwane, ngaphandle kokuba ngqongqo kunye nokuma okusesikweni kwilokhwe yamadoda, inqanaba lalisetelwe ukunxiba okwangoku.
Iingxaki Zokukhulelwa Iindidi Zesixokelelwano Irings Iphepha Lamaxabiso Antique Abantwana' Games And Software Iinkonzo Zematriki Citizen
iikati ezingamadoda ziqala nini ukukhwelana
isicatshulwa malunga nelahleko yomhlobo
yintoni eselwayo kamikaze
Ngubani onetyala le-2
ungangumlingani olungileyo waseFrance